Hawlaha ku gadaaman Mashruuca “Cable” ka “Fiber Optic” ga ah ee maraaya Somaliland
HomeCommunity EventsTestContact UsPoetryGabay ” Daduub” – Qaman BulxanGabay – “Dacartuba” – QaasimMay 22, 2013	You are here: Home / Articles / Hawlaha ku gadaaman Mashruuca “Cable” ka “Fiber Optic” ga ah ee maraaya Somaliland	Hawlaha ku gadaaman Mashruuca “Cable” ka “Fiber Optic” ga ah ee maraaya Somaliland
February 7, 2011 By admin By Abdi Aye
Wadhaf News (Dallas)- 07/02/2011- Waxaynu beryahan dambe waararka ku maqalnaa xadhiga “cable” ka badda hoostiisa mara. Waxaan idiin soo bandhigaynaa maqaal wax idiinka ifin doona mashruucaas iyo arimada la xidhiidha een dadka wali murug kaga jiro.
Maqaalkani waxaan ugu talo galay inuu fikirad kooban idinka siiyo mashruuca “Cable Fiber Optic” waxaanan ugu horayn eegaynaa isbadalka xawliga ku socda ee is gaadhsiinta, waxaan raacin doona faalo isha ku haysa isgaadhsiinta hadda la isticmaalo, tan casriga ah iyo halka la hiigsanaayo iyo siday dawlada Somaliland u maaraysay mashruucaas waxaanan ku soo gabagabay doonaa walaaca laga muujinaayo sida loo maareeyay mashruucaas isaga ah.
Isbadal xawli leh
Laga bilaabo burburkii Somalia, Isgaadhsiinta Telefonada iyo Internetkuba horumar weyn oo la qiyaasi karin ayey ku talaabsadeen. Xirfadda (Technology) oo sanadba sanadka ka dambeeya sii casriyoobeysa, una saamaxeysa in xawligu kordho, sicirkiina (cost) hoos u dhaco iyo ta ugu mihimsan oo ah in xayiraad la’aan sharciyaysan (lack of regulation) ku shaqeeyan shirkadaha ganacsi ee isgaadhsiintu waana tan sahashay in agabka isgaadsiintu aad uga horumaro agabyada kale.
Markii la arkey baahida dadku u qabaan iney la xidhiidhan dadkooda dibadda iyo gudaahaba, ayaa Shirkado badan bilaaben iney maalgashi ku sameeyaan isgaadhsiintii iyagoo sii batay. Ilaa iyo sanadkii 90kii, Isticmaalka isgaadhsiintu waxay kor u kacdaye 10 jibaar. Haddi markii hore Telefonka guriga uun baahidu ku koobnayd waxaa ku soo biirey Wireless (Mobile) iyo Internetka. Taasina waxay ummadii gaadhsiisay horumar dhaqaale, ganacsi, bulsho, waxbarasho, saxaafadeed iyo mid siyaasadeedba. Noloshii dadka iyuu isbadal weyni ku dhacay.
Iyadoo intaas oo horumar ah lagaadhey 20kii sanadood ee la soo dhaafey, haddana markaad u eegto addunyadda horay u martay, Isgaadhsiinta Somalia/Somalilandba weli aad by u hooseysaa. Hoos u dhacaana waxa sababey farsamada hada la isticmaalo oo aan awood u lahayn Koboc (Scalabilty) Xawli,(Speed) Mug(Bandwidth) iyo qiimaha oo weli aad u sareeya(Cost).
Jabuuti dhinaceega horumar iyay ka gaadhay marka loo eego Soomalia laakiin wali waxaa jira sixirka oo aad iyo aad u sareeya sobobtoo ah hal shirkadeed oo dawliya iyaa maamusha isgaadhsiinta. Jabuuti waxay isticmaashaa shan “cable system” oo aduunka ku xidha oo kale ah SeaMeWe3, Aden-Djibouti, Eassy, Seacom, EIG ( 3.84 terabits per second) . Taas iyaa u sahashay iney Jabuuti noqoto goob u sii qaybisa ama ay ku talaalmaan dalaka jaarka ah sida Itoobiya oo baahi weyn u qabta isgaadhsiinta casriga ah. Nassib daraduse waa shirkada qudha ee Djibouti Telecom oo “monopoly” ku haysata isgaadhsiinta oo tafaariiq ahaan uga ganacsata iyaan dadka reer Jabuuti u suurta gelin iney qiimo jaban ku helaan adeegaas oo casri ah balse qaali ah.
Farsamada (technology) dhulka soomalida hadda isticmaalaan.
Satatelitka (VSAT): Xirfaddani waxay adeegsata, dish yar ( Balac -2 meter) oo dhulka yaala xidhiidhna la leh Satelitka cirka meera (Geo Stationary). Addeegan VSAT waxa aalaba isticmaala, Meheraddaha yaryar, waxabarashada fog (Distance learning) iyo Haayadaha Caalmiga ee wadanka Jooga. Xirfadani oo kale waxa xaddida, quwada oo yar, qiimaha oo badan iyo isgaadhsinta oon xawli ahayn (propogation delay)
Microwave: Xirfaddani waa mid isticmaasha laba saxan (dish) oo iska soo horjeeda oo la saarey buuraha iyo meelaha dhaadheer si loo helo “signal” isku beegan oo quwad leh. Waa farsamo isgaadhsinta lagu tebiyo laguna gaadhisiyo meelaha fog-fog. “Microwave” ku dhibaatoyinka horyaala ee xaddidaa waxa ka mid ah –Roobab da’a, shucaaca cadceeda, dabeylaha iyo waxa alle wixii ku beegma signalka u dhexeeya labada dish. Qiimo ahaana wuu ka qaalisan yahay” VSAT”ga.
Labadaa xirfadood een kor ku xuseyba waxay leeyhin xad (Limitations) mark la eego sidii loo horumarin lahaa isgaadhsiinta casriga ah.
Hadaba maxaa Cusub oo badelaaya Technology-gaa hore ?
Akhristow waxan u maleynayaa inaad maqashey “Fiber Optic” . Waa farsamo cusub oo la adeegsanayo Quraarada(Glass) oo laga dhigey Miiq-duneed dhumicdeeduna leegtahay tinta aadamaha (Tiny strands of Glass). Qaruuradaas tinta la dhumuc ah iyaa lagu shidey aalada laydka leh ee “LAYSAR”ka loo yaqaano. Laydhkaa iyo Quraradaa ayaa la raacineyaa wixii war (data) ah.” Fiber Optic” gu wuxu awood u leeyahay inuu markiiba qaado “Information” laxaad leh isagoo gaadhsiineya Jiid dheer. Xirfadani waa mid jaban (Less cost), cimiladuna saameyn ku lahayn, si dhib yarna loo dhiso karo.
Hadaba Dawladaha Geeska iyo Beriga Africa oo ka koban 16 wadan (92%) iyo duinida Caalamka ee kale (8%) ayaa Sanadkii 2003 di ku heeshiyey in isgaadhsiintooda wadanadaas lagu xidho tan adduunka horumarey iyadoo la adegsanaayo “Fiber optc cable” ee Badda hoostiisa mara. Mashruucas oo magaciisa la yidhaado (East African Submarine Cable System (EASSY)) dheererkiisu wuxuu gaadhayaa 9,900km, Kaaso isku xidhaaya Port Sudan(Sudan) ilaa Mtuniz (South Africa).
“Cable”kan waxaa la sheegay inuu yeelan doono 8 xarumood (stations) oo lagu talo galay in isgaadhsiintaa looga gudbiyo wadanada intood kale. Waxayna kala yihiin (Maputo (Mozambique), Toliary (Madagascar), Dar-Es-Salaam (Tanzania), Zanzibar (Tanzania), Mombasa (Kenya), Mogadishu ( )Somalia, Djibouti (Djibout Rep) iyo Massawa (Eritrea).
“ Cable”kan waxa lagu qiyaasey inuu walwaali doono Mug (Bandwidth) leeg 1Tera Bit/sec= 1 million Megabit/sec. Sida la sheegey Wadano ka tirsan isbahaysigan ay bilaabey iney adeegan cable isticmaalaan sanadkii la soo dhafey 2010, dabayaaqadiisi , halka kuwo kalena (Somalia) ay weli u dhiman tahay iney stationkiiba sameystaan.
Dariiqa EASSY Cable
Soomalida iyo Mashruuca EASSY iyo Sidii Soomaliland u maaraysay
Sidaan qaybta hore ku caddeeyey, Qorshihii hore ee EASSY , Berbera (Somaliland) kuma jirin goobaha stationada laga sameynaayo, Xamarbana doorashada heshay. Shirkada La yidhaaho DALKOM oo xirfad u leh isqaadhsiinta Koonfur Somalia ayaa la siiyey koontaraagii sameynta iyo maamulida Stationka Xamar. Maadama Xamar noqotey goob dagaal, DALKOM way u soorto geliweydey qorshihii Xamar, waxayna mashruucii ula timid Somaliland si ay wax ula qabtaan, stationkiina loogu soo wareejin lahaa Berbera.
Arrinkaas DALKOM wadatay, Dowladii Somaliland wey ka biyo diiday,waxayna u soo bandhigeen in Sationkana la keeno Berbera, DALKOM na Ka baxdo meesha oo wax shaqo ah ku yeelan. Arrinkaas DALKOM uma cuntamin, waxayna ku adkeysatay iney la noqoto mashruucaasi.
Xaalku marku halkaa maraayo, waxa golihii ku soo biirey shirkad laga leeyahay Dalka Jabuuti oo la yidhaa SOMCABLE—Dadka Qaarkoodna tuhusan yihiin in dad dawlada Jabuuti ka tirsan qayb libaax ku leeyahay shirkadaas, qaybta kalena nin la yidhaahdo Maxamad Aw Siciid leeyahay, ninkaas oo jinsiyada Jabuutina haysta isagoo dalkaas degay dhowr iyo siddeetanaadkii.
Shirkadani SOMCABLE oo hadaba keenta isgadhsiinta “Microwave” ka ka keentan Jabuuti, waxay u soo bandhigtey Dowladii Somaliland ee Madaxweye Rayaale hindise cusub oo ah iney Station ka EASSY ku leedahay Jabuuti Ka soo jiidan Cable kale oo ka madaxbanaan Dalcom, Berberana ka Furaan station SomCable gaar u leedhahy.
Fikradaas, Madexweyne Rayaale mabda’ahaan ma diidin laakiin kuma calool fayoobaan qaabka shirkadu u rabtay iney gaar u yeelato hantida. Wuxuna ka doorbiday oo uu soo jeediyay hindise heeshiis oo ah saamii qaybsi dawladu iyo SomCable yeeshaan. Warar xoogogaal ihi waxay xaqiijiyeen in Madexweyne Rayaale Kula gorgortamey SomCable (50%-50%), taladaas waxaa ganafka ku dhuftay Maxamad Aw Siciid oo ka soo horjeestey, gorgortankiina halkaa ayuu ku dumey. Is afgarasho la’antaa iyaa loo aaneeyaa iney ka mid tahay sobobihii u weynaa ee guuldaradii Rayaale ka raacday doorasadii madaxweynenimada ee kal hore ka dhacadey Somaliland, Kadib markii, Ina Aw Siciid oo degan ahaan ka soo Jeeda Somaliland ku qaadey olole ka dhan ahaa Rayaale.
Doorashadii Silaanyo madaxeynaha ku noqdey ka bacadi , Hindisihii SOMCABLE iyo Somaliland Ididillo cusub ayuu yeeshay. Madaxweyne Silaanyo, wuxuu goostey in kontaraagii “cable” ka ay gebi ahaanba (exclusive) SOMCABLE yeelato. Hayeeshee lama oga saamiga ay Somaliland ku yeelaneyso mashruucaas. Waxaan waliba la ogayn in dawladu ama dad dawlada ka tirsan ay ku leeyihiin saami qarsoon iyo in kale. Si kastaba ha ahaatee go’ankaas madaxweynuhu iyo Somaliland ka soo maan guuray wuxu kiciyey tuhun iyo isweydiimo.
Maxaa xigi doona heshiiska dawlada iyo SomCable?
Arrimada dadka reer Somaliland isweydiineyaan waxaa ka mid ah:
1. Mida hore, waa fikrada ah maadamoo dawladaha Afrikada Beri ee Ku jira Qorshaha EASSY mid kastaba yeelatay goob Station, maxaa u diiday in Somaliland raadiso qaybtii ay ku lahayd Somalia, uulana gorgortami weydey EASSY si Berbara u noqoto goob ( Station) gaar ah, dabadeedna “Cable” ka toos looga soo qaadi waayay dhuunta badda cas marta halka Jabuuti la hoostagayo?
2. Midda labaad ee runtii jawaab dhab ah u baahani,waxay tahay labadan su’aalood: Maxaa kontaraagaa SOMCABLE keliya loo siiyey, looguna ogolaan waayey in shirkadaha kale ee Somaliland jiraa, awoodana u leh, iney ka qeyb galaan tartankaa (Contract Bid)? Ma haboonaan lahayd in ka dib markii la tartansiiyo shirkadahaa, la gudoonisin lahaa tii ku guuleysata, kadib markey buuxiyan shurudaha dawlada ka rabtey ?
3. Waliba waxay dadweynuhu hoosta ka xariiqaan sida dahsoon ee arintan loo maareeyay. Waxaa lays waydiineya sobobta dawladu uugu khasbi weyday SomCable iney dhaqan cadaaladeed muujiso si dadweynaha gobolada kala duwan ee dalku saami ugu yeelan lahaayeen shirkad dawladu “Monopoly” u saamaxayso. Maxaase laga yeeli doonaa boqolaalkii shaqaale ama mulkiile eek a ganacsan jirey isgaadhsiinta?
Waa hubaal in adeega Isgaadhsiintu hore u maraayo marka la soo jiido “Cable”ka, Isticmaalkiisuna bilaabmo marka laga eego dhinca farsamada, quwada, iyo kalsoonida. Hayeeshe u ogolaanshaha loo ogolaaday hal shirkad iney faraha ku hayso awoodi isgaadhisimeed ee wadanka oo idil waxay Keeni doonta “Monopoly”. Shirkadihii yaryaraa ee hadda jirayna iney suuqa ka saarto iyaa wax la hubo ah. Sicirkii iyo tartankii ka dhexeeyay shirkadaha yaryar si ay u soo jiitan macaamishooduna iyaa iyaduna meesha ka baxaysa. Haddi lagu adkeysto in SOMCABLE yeelato adeeg “fiber optic” waxaa haboon iney noqoto shirkad Jimlad (Wholesaler) ah, haddiise ay ku soo biirto Tafaariq (Retailer) waxaa laga yaabaa iney shirkado badani suuqa ka baxaan. Halistuna waxa weeyi in sida Jabuuti ka jirta in qiimuhu kor u kaco mar haddii SomCable noqoto “Monopoly”.
Si kastaba ha ahaatee, Dawlada Silaanyo & SOMCABLE mashruucoogaasi waxaad moodaa inuu tabantaabo guul ah ku socda. Goor aan fogeyna la arkidoone cawaqib xumadda ka dhalan doonta go’anka dawladu la gaadhey SOMCABLE, cawaaqib xumadaas oo keeni kara dhibaatooyin siyaasad-dhaqaale oo mug leh.
1. EASSY project Summary
2. Understanding the regional undersea cable system – small globe solution
INDU0.00 N/A N/ANASDAQ3498.965 +33.722 +0.97%S&P 5001669.16 +2.87 +0.17%^FTSE6788.54 -15.33 -0.23%DAX0.00 N/A N/ACAC36.60 0.00 +0.00%1970-01-01 00:00